Homeसमाचारसैफ अली खानको ५ हजार ८०० करोडको महल, यस्तो छ महलको सुन्दरता (भिडियो हेर्नुहस्)
October 23, 2020 admin समाचार 10194
सोशल मिडि’यामा ५ हजार ८०० करोड रु’पैया मुल्यको पटौदी प्यालेसका धेरै तस्वी’रहरू भाइरल छन्। बलिउड अभिने’ता सैफ अलि खानको त्यो मह’ल देख्दा सबै छक्क पर्छन्। यस्तो अवस्था’मा उनका फ्यान’हरुले प्रश्न गरेका छन् की सैफ, करीना र उनका छोरा तैमूर’लाई यो दर’बारमा बसाई सार्नेछन् ?
बलिउड’का नवाब सैफ अली खान आफ्नो भव्य जीवन’शैलीका लागि परिचित छन्। अभिने’ताको आफ्नै नवाबी शैली छ जस’मा सबै प्रशं’सकहरू फिदा हुन्छन् । भर्खरै, सैफले आफ्नो परि’वारको साथ पटौदी दरबा’रमा केही समय बिताए। उहाँ त्यहाँ केही दिन बसे र धेरै रमाईलो गरे। त्यहाँ गुण’स्तरीय समय बिता’इसकेपछि सैफ, करीना र तैमूर मुम्ब’ईमा फर्केका छन्।
तर सोशल मिडि’यामा ५ हजार ८०० करोड रुपैया परेको प’टौदी प्यालेस’का धेरै फोटोहरू भाइरल छन्। त्यो महल दे’ख्दा सबै छक्क पर्छन्। सैफलाई यहि प्रश्न एक न्यूज पोर्टलले सोधेका थिए र अभिनेताले पनि चाख’लाग्दो जवाफ दिएका छन्। सैफ अली खानका अनुसार यो पनि एक उत्त’म बिचार हो ।
सो महलमा उनीहरुको जिव’नशैली निकै रोमाञ्च’क हुनेछ । तिनीहरू पौडी खेल्न, खाना पकाउन, पुस्तक’हरू पढ्न, परिवारको नजिक रहन पाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा जीवन उत्तम हुन्छ। उनले अझै सो दरवारको नजिकै राम्रो स्कूल’हरूको आवश्य’कता रहेको बता’एका छन् ।
यो महल आफ्नो बना’उन सैफलाई धेरै मेहनत गर्नु परेको थियो । उनले हालै ८०० करोड मुल्य चुका’एर मात्र आफ्नो बनाएका छन् । आफ्नै महल भएपनि केही काग’जात नमिलेका का’रण उनले समस्या भोगेका थिए ।
१० एक’डमा फैलिएको यस दर’बारको १५० कोठा छ। यस बाहेक, त्यहाँ सात बेडरूम, ड्रेसिंग कोठा र बिलियर्ड कोठा छन्। सोशल मीडि’यामा यस वि’लासी महलका धेरै चित्रहरू छन् । करी’नाले त्यो दरबार’को तैमूरका केहि त’स्वीर पनि सा’र्वजनिक गरेकी थिइन् । -इ ताजा खबर बाट
May 30, 2021 admin समाचार 3642
March 23, 2021 admin समाचार 4436
May 21, 2021 admin समाचार 4245
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (227584)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (220513)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (220327)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (217452)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (216472)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (215165)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (213876)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (213807)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (182272)